11:11 ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို သင်မကြာခန တွေ့ဖူးလား?(ဒါက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ)
အစပိုင်းမှာတော့ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ထင်ရပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူတွေမှာ အဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်မှုတွေဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲ?ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေများလာလို့ သုတေသနတွေကလေ့လာပီးရင်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ 11:11မှာ ထူးခြားတဲ့သဘာဝလွန်စွမ်းအင်တွေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ဝိညဉ်ရေးရာသတင်းစကားနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့ရတာပါ။
နိုင်ငံတကာမှာတော့ 11:11ကို ဝိညဉ်ရေးရာနိုးထမှု လို့ဆိုပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရော ဒီဂဏာန်းတွေကို မြင်ဖူးလား? မကြာခနမြင်နေရပြီဆို အဲ့ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး? ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်..
11:11ကိုမကြာခနတွေ့တွေ့နေတတ်ခြင်းက သင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ သဘာဝလွန်ပုဂ္ဂိုလ် သို့ သင်နဲ့အတိတ်ဘဝကနီးစပ်ခဲ့တဲ့ ဝိညဉ်တွေက အရေးပါတဲ့မက်ဆေ့တစ်ခုခုကိုပြချင်ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ကသင်အဲ့ဒါကိုသိအောင် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေရင် 111ဆိုတဲ့ဂဏန်းကိုမြင်အောင် ဒါမှမဟုတ် သင်နာရီကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုတွေ့အောင် သင့်ကိုအားရုံစူးစိုက်အောင်လုပ်တာမျိုးဖြစ်ပြီး သင့်ကိုဆက်သွယ်ချင်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောာ်တော့မတူဘူး။ တချို့တွေက 12:12လိုနံပါတ်တွေ မကြာခနတွေ့ရတတ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
လူအများစုက ဒီနံပါတ်ကို နာရီတွေ၊ လမ်းဘေးကြေငြာ်ဆိုင်းဘုတ်တွေ၊ သင်ကေတတွေ ဆိုင်းဘုတ်တော်တော်များများနဲ့ စာအုပ်တွေမှာလည်း ခနခနတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက နာရီကို အချိန်တိုင်းကြည့်နေတာမဟုတ်ပဲ တခါတလေကြည့်လိုက်ရင်တောင် ဒီနံပါတ်ပဲတွေ့နေရတာမျိုး၊ လမ်းသွားရင် ကားနံပါတ်လေး မတော်တဆကြည့်မိရင်လည်း ဒီနံပါတ်ဆိုတာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကဘာကိုပြောနေလဲဆိုရင် လှပတဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးအတွက် ကျွန်တော်တို့ သတိ အသိနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်၊ ကမ္ဘာကြီးအတွက် တာဝန်တွေလစ်ဟင်းနေလို့ သတိပေးမက်ဆေ့ပို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဒါမှမဟုတ် သဘာဝလွန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက သင့်ရဲ့ အသိပညာနဲ့ မြင့်မားတဲ့သတိကို တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း အသုံးချဖို့ 11:11ကို မက်ဆေ့ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးက သင့်မှာစိတ်ပျက်စရာ စိတ်ရှုပ်စရာ ရွေးချယ်စရာနဲ့ဘယ်သူ့မှကိုယ့်ဘက်မှ မရှိတော့ဘူးလို့ခံစားလာရချိန်တွေမှာကိုယ့်ကိုကိုပိုသတိရှိဖို့ သင့်မှာ လမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့ အမြဲတမ်းညဏ်ပညာရှိကြောင်း သတိရစေချင်ဖို့က သူတို့ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက သင့်အတွက် သင့်အတိတ်ဘဝက သင်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ ဝိညဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာကို သူတို့က သိစေခြင်းမျိုးပါ။
သဘာဝလွန်ကမ္ဘာ တစ်နည်း ဝိညဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကမ္ဘာနဲ့ လူသားကမ္ဘာကြားဆက်နွယ်မှုမှုကိစ္စတွေမှာ ထင်ရှားတဲ့ Doreen Virtue ဆိုတဲ့ပညာရှင်အဆိုအရ 11:11နံပါတ်တွေကိုထပ်ထပ်ခါ မြင်ခြင်းက သင်ဟာအဆိုးမြင်အတွေးတွေကိုရပ်တန့်ပြီး အပြုသဘောဆောင်တာတွေတွေးဖို့လို့ဆိုပါတယ်။
သင့်ဘက်မှာ မမြင်ရတဲ့ ဝိညဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိနေတဲ့အတွက် သင်ကြောက်ရွံနေသောအရာတွေအစား သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်လုပ်ဖို့ သင်တစိုက်မတ်မတ်လုပ်တာနဲ့သူတို့က သင့်ကိုဆက်လက်ပြီးဆုလာဘ်တွေချမှတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုနေတာလို့ Doreen Virtue ကပြောခဲ့ပါတယ်။
သူကAnglesလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေ မြန်မာလိုဆိုရင် အဆင့်မြင့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သင့်ကိုကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေတာလို့ဆိုလိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနံပတ်တွေကို ခနခန ထပ်ခါထပ်ခါ မြင်ရတာစိပ်လာပီဆိုရင် သင့်စိတ်ဝိညဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မမြင်ရတဲ့လောကက သင့်ရဲ့ဝိညဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုတွေ ပိုခိုင်မာလာပါလိမ့်မယ်။
တခါတလေ သင့်စိတ်က အလိုလိုသိနေတာမျိုးတွေ နောက်ဆုံး တခြားသူတစ်ယောက်ဘာပြောတော့မယ်ဆိုတာ ကြိုသိနေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေဟာ ကမ္ဘာမှာသန်းနဲ့ချီရှိနေနိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်လည်ကုစားဖို့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့သဟဇာတဖြစ်မှုကို ပြန်လည်ယူဆောင်လာဖို့ ခရီးထွက်လာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် မြင့်မားတဲ့ဘုံ့ဘဝကနေ ဆင်းသက်လာသူတွေဟာ 11:11ဆိုတဲ့နံပါတ်တွေကို ခနခန မြင်ရတတ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျင့်စဉ်တွေလေ့ကျင့်တာများလာရင် ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဝိညဉ်ဆိုင်ရာ အသိညဏ်ဆိုင်ရာတွေမြင့်မားလာမှာဖြစ်ပြီး လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို သူတို့ကုသပေးကြပေးကြဖို့ ပြန်ရောက်လာသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာ သူတို့ဟာသူတို့ဆောင်ရွက်ဖို့ မစ်ရှင် သတိပြန်မရနိုင်သေးတဲ့အတွက် 11:11တွေကိုထပ်ခါတလဲလဲမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားးးး